Labsa walii Galtee Dhaabboto Oromoo Oromia Shall be Free |
Labsa walii Galtee Dhaabboto Oromoo
bilisummaa October 28, 2016	Comments Off on Labsa walii Galtee Dhaabboto Oromoo
Guyyaa: Onkololeessa 20, 2016 Lakkooysa: kwo/fido/Atbu /25/2016
Yeroon tun tan, sirni bittaa Ethiopia kan murna Tigrayn durfamu, ardii Oromiyaa irratti,
basaan-baasaa gad-na baasaa jechaa jiru. Gocha farra namummaa fii jireenyaa, kan shanyii
duguuggaa ummata biyya sanii keeysaahuu ummata Oromoo irratti geggeeysaa jira. Ummata
ayyaana kabajatuuf nagayaan, Hora Arsadee irratti kumaatamaan wal gahe, lafaa fi samiin
rasaa itti roobsee murruqii itti buusee. Karaa biraatiin, Oromoota jilmaan hidhe, mana hidhaa
ibiddaan qanqaamee, kan duraa fiiguu yaale rasaasaan lafaa guuruun, wanni nama agarsiisu,
tuutni mootummaa ifiin ju’u sun, namooma dhaba isaaniiti.
Daranuu baasa tahee, yakka isaa mirkanii seeraa itti godhuuf, maqaafillee tahu, bulmaata
ummataa kan ture, labsa sardamaa, kan humna waraanaatiin geggeeyfamu itti baase. Labsa
kana jalatti, waraanni raayyaa, kan humna ‘Agaazii’ jechuun beekkamtu, lubbuu namaa akka
busaawaa gaaraatii gatuuf mirga kennaafi. Haalli akkanaa, addunyaa ilma namaa tokkollee
keeysatti dhagahamee waan beekkamuu miti.
Haa tahuu malee, akka gootichi Oromoo, Adam Jiloo je’e, “Ummanni Oromoo biyyeedha,
gabroomfataan ammo haxooytuudha.” If dhiba malee ajeechaan ummata keenya fixuus, qabsoo
itti jiru irraa igguruu hafee, daran jabeeysa. Inumaa, godaannisa seenaa kan gaafa
Harma-muree fii Calii Calanqoo madeesee, ummata Oromoo qabsoo bilisummaa akka finiinsu
Ummanni Oromoo, weerara irra jira; mootummaan Tigree ammo, taaytaa irra turuuf if ittisa
keeysa jirti. Qeeyroon Bilisummaa, akka kannisa orraadhaati, iddoo hundaa ka’ee, humna
diinaa rooraasee, waan qabatuu fi dhiisu wallaalchisaa jiraatuu arkaa jirra. Utubaa mootumichaa
abbaa-irrree, kan tahe qabeenya hoogganoota TPLF barbadeeysuun, karaa hundaan bitii-
gurgurii waxii itti muruun toofataa qabsoo kan afshaalummaan qindaawe kan ummanni keenya
geggeeysaa jiru fakkii seenaa qabsoo addunyaa keeysatti argamee tan beekkamne tahuu qofa
osoo hin tahin dinqisiifamaadha.
Ilamaan Oromoo, kanneen wayyaaneen hujiin isaatiin annjefatuuf jaarratte irraa hoongawaa jirti.
Keeysaa, akka rirmaati isa bocuu, hujii isaanii saaxiluu fii danquu bira taranii, heedduun isaanii
afaan qawwee diina isaan erge irratti gara-galchaa jiru; jabaadhaa seenaa boonsaa hojjadhaa
Oromiyaan humna alagaatiin boojihamtee, irree alagaa jala jirti. Humna caalaan/ humna gitu
horuun qofaan ummanni Oromoo abbaa haqa isaa taha. Nu dhaaboleen siyaasaa, Adda
Walabummaa Dimokraatummaa Oromiyaa, Adda Walabummaa Oromiyaa fii Adda Tokkumaa
Bilisummaa Ummata Oromoo tiin angafee, qabsoo ummanni keenya, walabummaa Oromiyaa fii
bilisummaa isaatiif godhaa jiru, keeysatti argamnee, Oromoo humneeysuuf yoomuyyuu daran
tokkumaan kaanee jirra. Kan abdatan Rabbii; saba-bicuu Tigree ifirraa kaafnee Oromiyaa
bilisoomsuu tabaroo gahaa akka qabnu ummanni keenya mirkaneesee jira; if booda deebiin
abduma hin jirtu.
Previous Mana Hidhaa Qilnixxoo fi Mana Hidhaa Impayeera Itoophiyaa.
Next Ethiopia must answer in illegal spying case, digital rights group says